News Collection: यौनसम्बन्धी कुरालाई मनबाट हटाई कसरी आफ्नो काममा ध्यान दिने?
यौनसम्बन्धी कुरालाई मनबाट हटाई कसरी आफ्नो काममा ध्यान दिने?
म २२ वषर्ीय अविवाहित पुरुष हुँ। मैले आजसम्म कुनै युवतीसँग यौनसम्बन्ध राखेको छैन, तर मलाई यौनसम्बन्ध राख्ने इच्छा भने एकदमै धेरै हुन्छ। म मनमा यौनसम्बन्धी कुरा मात्र खेलाइरहन्छु। यसले गर्दा मैले अन्य कामलगायत अध्ययनमा पनि राम्रोसँग ध्यान दिन सकिरहेको छैन। म हस्तमैथुन पनि गर्छु, तर पनि यौनतृष्णा मेट्न सकिरहेको छैन। म यौनसम्बन्धी यस्ता कुरालाई मनबाट हटाई आफ्नो काममा ध्यान दिन चाहन्छु। कृपया सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु।
किशोरावस्थादेखि नै युवावस्था अनि वयस्क हुने क्रममा प्रजनन, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन हुन्छन् र विकासको यो क्रममा बिस्तारै उनीहरू परिपक्व हुन्छन्। यी परिवर्तनमध्ये यौनसम्बन्धी परिवर्तन प्रमुख हुन्छ। हामी उनीहरूमा हुने शारीरिक परिवर्तनका बारेमा चर्चा पनि गर्छौं अनि एक हदसम्म त्यसको चासोलाई पनि पूरा गर्छौं। मानसिक तथा भावनात्मक परिवर्तनका बारेमा तुलनात्मक रूपमा धेरै चर्चा हुँदैन। यो उमेरमा के-कस्ता परिवर्तन हुन्छन् ? चर्चा गरौं।
१. अर्को व्यक्ति -धेरैजसो स्थितिमा विपरीत लिङ्गी) प्रति यौनको दृष्टिकोणले आकर्षण बढ्नु, २. यौनचाहना हुनु, यौनचाहना प्रकट हुनु तथा यौनसम्बन्धी कुराको खोजिनीति गर्ने हुनु, ३. मनोदशा -mययमक) मा चाँडो-चाँडो परिवर्तन हुनु, ४. बढी स्वतन्त्र हुने प्रयास गर्नु, ५. आधिकारिक व्यक्ति तथा परिवारको विद्रोह गर्ने, आमाबाबुविरोधी हुने, ६. एक्लै बस्न मन पराउने, ७. सोचाइमा परिवर्तन आइरहने, ८. बहस गर्ने र भनेको कुरा कम मान्ने, ९. बढी गोपनीयता चाहने, १०. शारीरिक परिवर्तनका सम्बन्धमा बढी सोच्ने र आफ्नो स्वरूपमा अलमलिने। महिनावारी, स्वप्नदोष, हस्तमैथुन, स्तन वा लिङ्गको आकारका बारेमा बढी चिन्ता गर्ने। के म आफैं ठीक छु ? भन्ने प्रश्न गर्ने। ११. लक्ष्यहरू परिवर्तन भैरहने। १२. दिवास्वप्न देख्ने र बढी कल्पनाशील हुने। काल्पनिक -असम्भव) कुरा सोच्ने। १३. आफ्नै मूल्य-मान्यताहरूको विकास सुरु गर्ने। १४. आफ्ना समस्याहरूलाई बढाई-चढाई गर्ने, 'कसैले बुझ्दैन' भन्ने सोचाइ राख्ने।
यी सबै परिवर्तनका साथै आफूलाई व्यवस्थित गर्नु आफैंमा असजिलो कुरा हो। त्यसमा पनि आफूमा आउने यौनप्रतिको चाहना, त्यसलाई शान्त पार्न के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन जस्ता कुरामा अलमल हुन्छ। त्यसमा पनि यसैबेला यौनसम्बन्धी सपना पनि देखिन्छ। यसको अर्थ के होला ? यो कुनै रोग त होइन भन्नेजस्ता कुराले अन्यौल हुन्छ। यसरी तीव्र रूपमा यौन चाहना हुँदा अध्ययन तथा घरका अन्य कामकाजमा मन नजान सक्छ।
यौन मानवजीवनको अभिन्न अङ्ग हो। सबैजसो स्वस्थ व्यक्तिमा प्राकृतिक रूपमै यौनेच्छा हुन्छ। भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि आवश्यक कुरा हो मानवजीवनका लागि। यो प्रकृतिले नै दिएको छ। सामान्य भाषामा यौनसम्पर्क राख्ने वा यौनतनाव शान्त पार्ने इच्छालाई नै यौनेच्छा भन्न सकिन्छ। परिभाषामा केही फरक-फरक मत भए पनि यौनेच्छा वा यौन व्यग्रता एक मानसिक तथा भावनात्मक जैविक व्यग्रतासँग सम्बन्धित स्वाभाविक शक्ति हो। मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणाली सक्रिय देखिन्छन्। एक त भलमयअचष्लभ कथकतझ -इन्डोक्राइन सिस्टम) अन्तर्गतका रागरसहरूले त्यसको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्दि्रय प्रणालीका साथमा स्नायुप्रणाली। यौनेच्छा जाग्ने -विकसित हुने) वा त्यसको व्यग्रतामा एन्ड्रोजन -जस्तै टेस्टस्टेरोन) रागरस अर्थात् हार्मोनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अर्कातिर यौन सन्देशहरू मस्तिष्कसम्म पुर्‍याउन ईन्दि्रयहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् र मस्तिष्कले नै त्यसलाई अथ्र्याउँछ। यौन परिकल्पनामा पनि मस्तिष्ककै हात हुन्छ। यौनेच्छा अनि यौनक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले त्यसलाई सबैभन्दा ठूलो यौनअङ्ग पनि भनिन्छ।
विवाहपूर्व यौनेच्छा शान्त पार्ने कुरा
यौनेच्छा तीव्र भए पनि विवाहको उमेर अहिलेको आधुनिक समाजमा पछिल्तिर धकेलिएको छ। सजिलै यौनेच्छा शान्त पार्न हस्तमैथुनको सहयोग लिनु मनासिव नै हो। किशोरावस्था अनि युवाअवस्थामा हुने असीम यौन चाहना शान्त पार्न कतिपयले यौनसम्पर्क गर्छन्् तर तपाईंले यौनसाथी नभएको र यौनसम्पर्क नराख्नुभएको कुरा गर्नुभएको छ। यो एक किसिमले राम्रै कुरा हो, किनभने विवाह पूर्वयौनसम्पर्क राख्नुका आफ्नै समस्या हुन्छन्।
हुनत तपाईं किशोरावस्थाको चञ्चले अनि अस्थिर मनस्थितिको अवस्था पार गरेर युवा अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ, तर पनि यतिबेला यौनका कुरा मनमा आउँछन् अनि अध्ययनमा ध्यान दिनु पनि आजको आवश्यकता हो। स्वाभाविक कुरालाई धेरै दबाउन खोज्दा हामीमा भएको शक्तिको सदुपयोग हुँदैन। मेरो विचारमा शक्तिलाई उचित रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यौनसम्पर्क होस् वा हस्तमैथुन हामी यौनाङ्गको घर्षणबाटै यौन चरमसुखको स्थितिमा पुग्छौं। अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा पक्कै थप रोमाञ्चकता हुन्छ तर त्यसका असजिला पनि छन्। अर्को व्यक्तिको यौनसम्पर्कभन्दा हस्तमैथुनमा पर्याप्त यौन परिकल्पनाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंले हस्तमैथुनबाट यौनतृष्णा नमेटिएको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसलाई रोक्नुको सट्टा केही थप गर्न सकिन्छ, जसले यौनतृष्णा मेट्न सहयोग गर्छ अनि बाँकी समय अध्ययनमा लगाउन सकिन्छ। नियमित योजनाबद्ध रूपमा समय-तालिका बनाएर अध्ययन, मनोरञ्जन अनि साथी तथा परिवारसँग अनि घरको काममा सहयोगजस्ता सबै कुरा मिलाएर गरे दैनिकी सन्तुलिन हुन्छ र अध्ययनलाई दिएको समय पनि उत्पादनशील एवं प्रभावकारी हुन्छ। आफूले पढेको कुरा परिवारको कुनै सदस्यलाई समय मिलाई समीक्षा गर्दा पनि अध्ययनमा ध्यान केन्दि्रत गर्न सजिलो वा भनौं मन बरालिने क्रम कम हुन्छ।
मनबाट हटाउन जति खोज्नुहुन्छ त्यति नै गाह्रो हुन्छ। आफूलाई रुचि भएका विषयमा समय दिइयो भने यस्ता कुरा केही हदमा भए पनि कम भएर जान्छन्। यस्ता रुचिका विषय शारीरिक परिरश्रम पर्ने खेलकुद, यौनबाहेकका साहित्य, सामाजिक कार्य, संङ्गति, सिर्जनशील कलाजस्ता कैयौंमध्ये कुनै एक हुनसक्छ।